Ukukhula kweCilantro - Herb Garden
Unokufunda indlela yokukhulisa i-cilantro, imifuno eyaziwayo esetyenziselwa ukutya ukutya kwamaxesha kunye namagqabi awo amatsha okanye omisiweyo. ICilantro nayoivelisa imbewuEzisetyenziselwa ukwenza i-spice eyaziwa njenge-coriander.
Uyikhulisa njani iCilantro
I-Cilantro yinto elula ukukhula. Ingakhula kwifayile ye-Iindawo ze-USDA ezinzima3 ukuya ku-10.Kudinga iintsuku ezili-14 ukuya kuma-21 ukuze izityalo zivele kwaye kwiintsuku ezingama-60-75, izityalo zifikelela ekuvuthweni. Amagqabi aluhlaza anzulu ayafana nokumila kwe-Italiya egqabi-tyaba, incinci kuphela.
Udingaumhlaba ovulekileyo okanye umhlaba oyisantiihlala ityetyiswa ngomgquba wefama. Unokongeza umgquba kunye nesigcina-kufutshane kwisityalo ngasinye ukugcina ukufuma.
Ungasebenzisa umgquba endaweni yomgquba.
Emva kokulima, rhola ibhedi ukwenza umhlaba olungileyo (ukhulule umhlaba) ukuya kuthi ga kwi-12 'ubunzulu.
Ungalungelelanisa i-pHukuya kuthi ga kwi-6 yeziphumo ezilungileyo.
Ngaphambi kokutyala, kufuneka unkcenkceshele ibhedi yokukhula kusuku olungaphambi kokuhlwayela. Sebenzisa ukuhamba kancinci ukuze ungaphazamisi ibhedi, thambisa ibhedi ubuncinci i-4 ukuya kwi-6 '.
Hlwayela imbewu ngeesentimitha ezintandathu ukwahlukana kwi-1/4 'kwimisele enzulu kwaye ugqume ngomhlaba.
Nkcenkceshela ibhedi emva kokutyala.
Amanzi kanye ngemini ukuqinisekisa ukuba umhlaba awomi.
Amanzi amancinci kakhulu aya kukhokelela kwinqanaba lokuhluma eliphantsi.
Nje ukuba icilantro yakho isekwe, amanzi kube kanye ngeveki okanye nanini na xa ½ 'ungqimba oluphezulu lomhlaba loma.
Soloko ukuhamba kancinci ukugcwalisa ubuncinci i-5'o's 6 'inches deep.
Ungaze ufefe izityalo ngaphezulu ukunqanda ukungunda kunye nezifo ezahlukeneyo zezityalo.
Ukutyala i-cilantro kwilanga elipheleleyo kwiziphumo ezilungileyo. I-Cilantro inokuphila ubuncinci iiyure ezintandathu zokukhanya kwelanga, ke unokuyityala ekukhanyeni kwelanga ukuba kuyafuneka.
uyisusa njani ioyile kwindawo ekuqhutywa kuyo
Abanye abagadi begadi bathambisa imbewu evalelweyo ukuze ikhule ngokukhawuleza. Abanye bayayiqhekeza imbewu phakathi kobhontsi kunye neminwe yesalathiso. Akukho mfuneko kuba imbewu iya kuhluma ngokulungileyo ngombhede okhulayo ofumileyo.
Qalisa ngaphakathi kunye nokuTshintshela kwigadi
Ungaqala i-cilantro ngaphakathi phakathi kweeveki ezintandathu ukuya kwezisibhozo ngaphambi kwekhephu lokugqibela lentwasahlobo. Ungatshintsha izithole xa sele kuvela iiseti ezimbini zokuqala zamagqabi ayinyani.
Hlwayela iMbewu yeCilantro ngqo
Ungayalela ukuhlwayela i-cilantro ukuqala emva kweqabaka yokugqibela entwasahlobo. Ufuna ukutyala ngokulandelelana iicilantro rhoqo emva kweeveki ezimbini ukuya kwezintathu ukuqinisekisa ukuba unesityalo esiqhubekayo. I-Cilantro iya kuqhubeka nokuvelisa ukuya kwiqabaka yokuqala yokuwa.
Tyala iimbewu ezimbini qho ngeesentimitha ezintandathu ukwahlukana kwimiqolo yeenduli kuba ayiziveli zonke iimbewu. Uya kulahla ubuthathaka kwezi zityalo zimbini ukuba zivele zombini iimbewu.
Ukutyalwa kwegadi ngeenyawo
Ufuna izityalo ezilisithoba kwisikwere ngasinye xa usebenzisa indlela yegadi yonyawo lwesikwere. Tyala iimbewu ezimbini kwisityalo ngasinye osifunayo.
I-Cilantro kunqabile ukuba iphazanyiswe zizitshabalalisi okanye sisifo, ikakhulu ngenxa yevumba layo elinamandla, elenza ukuba ibe yeyona nto iphambili ekugxothweni kwezinambuzane. Isityalo, nangona kunjalo, sinokuphazanyiswa yindawo yamagqabi kunye nomgubo onomphunga xa kukho ukufuma okuninzi okanye ukujikeleza komoya okungalunganga. Qiniseka ukuba umhlaba unkcenkceshelwe kakuhle kwaye ubhityile kwizityalo ukuba ziyaphithizela ukuqinisekisa ukuhamba komoya olungileyo.
Ukuvuna amagqabi eCilantro
Njengazo zonke iimbewu, iseti yokuqala yamagqabi ngamagqabi embewu. Amagqabi ayinyani okanye amagqabi esityalo eza emva kwamagqabi embewu. Kwisithuba seeveki ezintandathu, izityalo ziya kuba namagqabi amaninzi kwaye ungawanciphisa amagqabi asezantsi ukukhuthaza isityalo ukuba siphume.
Le ndlela ikwacothisa oku kuhambo olufutshane olungenakuphinda lubhekiswe kwiintyatyambo, ukuhlwayela imbewu kunye nokufa. Ungaqala ukuvuna iseti engezantsi yamagqabi ngokusika ubude beziqu. Uya kuqhubeka nokuvuna ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Hlamba izityalo ngoko nangoko phantsi kwamanzi abandayo abalekayo.
Susa nawaphi na amagqabi atyheli.
Isityalo sonke singanqunyulwa, neengcambu kunye nazo zonke, okanye ungasebenzisa nje amagqabi.
Ukuba utyale umqolo omde wecilantro kwaye izityalo ziyaqhubeka nokukhula, unokuthatha isigqibo sokuba lixesha lokuba unciphise imiqolo. Ukukhupha izityalo ezilungele ukuvunwa yindlela elungileyo yokubhitya kunye nokuvuna amagqabi. Ukucuthwa kombhede ngale ndlela kukhuthaza ukukhula kwezityalo eziseleyo.
Imozulu eshushu ibangela uCilantro ukuya eBolt
I-Cilantro yaziwa ngokuba yi-bolt kwakamsinya nje ukuba amaqondo obushushu aqale ukunyuka. Ukuba uhlala apho amaqondo obushushu aphakamileyo khona, i-cilantro iya kubamba. Iindaba ezimnandi zezokuba, uya kuthi uphele ngolunye ulonwabo, imbewu yecoriander.
Kutheni izityalo Bolt
Ukubopha kwenzeka ngaphambi kwexesha lokuvuna. Isityalo sivelisa iintyatyambo ngaphambi kwexesha kumzamo wokwenza imbewu. Kwisenzo sokulangazelela ukusinda, isityalo siyangxamela ukuvelisa imbewu ukuze ikwazi ukuvelisa kwakhona. I-Bolting inokubangelwa kukunyuka kwamaqondo obushushu ashushu ukuba isityalo siphile, amaqondo obushushu abanda kakhulu kwisityalo, kunye nezinto ezahlukeneyo zoxinzelelo, njengamanzi angonelanga asongela ukuhlala kwesityalo.
Iingcebiso zokuCothisa iBolting
Kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ezinokulibazisa ukubopha xa amaqondo obushushu eqala ukunyuka. Ezi ndlela ziya kuyicothisa inkqubo kwaye azinakuthintela ukungaphepheki.
Xa izityalo ziphakame kangange-4 ukuya ku-5 ', ungawancinda umva amagqabi ngaphezulu kwesityalo ukuwunyanzela ukuba ukhule kwaye uhlale uhambelana.
Ungaqhubeka ucofe umva umphezulu wesityalo ukucothisa inkqubo yokubopha.
Unako ukuvuna rhoqo amagqabi ukuqinisekisa ukuba isityalo asidluli kunye ne-bolt.
Izityalo zeBolting zivelisa iintyatyambo kunye nembewu
Iintyatyambo ezimhlophe ziya kuvela kanye xa amaqondo obushushu esiba shushu kakhulu. Ukudubula okude kuya kuqala ukuvela kwaye amasebe aphume kwimidlalo yee-umbels ezininzi okanye iintloko zeentyatyambo eziphethe ezimhlophe zikhanyayo iintyatyambo ezipinki. Akukho kubuya mva nje xa iintyatyambo ziqhakaza. Amagqabi e-cilantro akhawuleza alahle incasa njengoko isityalo siqeqesha amandla aso ekwenzeni imbewu yekoriyandire.
Amanyathelo okuvunwa kwembewu yeCoriander
Uya kuqaphela amaqunube amhlophe aluhlaza amancinci ngokukhawuleza xa kuvela iintyatyambo. Amajikijolo akhawuleza aqine kwaye ayoma njengoko ekhula. Ungayivuna imbewu kwaye uyisebenzise kwiindlela ezahlukeneyo zokupheka.
Jonga iintloko zembewu ngeempawu zokukhula. Ukuba uqaphela iimbewu ezininzi zilahlekile, lixesha lokuvuna iqela.
Thatha ingxowa enkulu yephepha emdaka kwaye uvale intloko nganye yeentyatyambo.
Hlanganisa ezantsi kwebhegi ejikeleze isiqu kwaye usike isiqu esingezantsi kwebhegi.
Susa ngocoselelo ingxowa yembewu ebhegiweyo, uyijike ujonge ezantsi ixesha elide ngokwaneleyo ukuze ukhusele ibhegi esiqwini.
Shiya intloko yesiqu ngaphakathi engxoweni kwaye uyixhome ibhegi ijonge ezantsi ngeziqu phezulu.
Xa iziqu zomile, susa kwindawo yokuhlala.
Vala ibhegi ngokuqinileyo kwaye ushukumise ukukhupha imbewu.
Kumhlaba othe tyaba waneka amaphepha amaninzi etawuli kwaye ukhuphe ngononophelo ibhegi kuwo.
Yahlula imbewu kwisiqu kunye neentyatyambo zeentyatyambo.
Ungayivumela imbewu ukuba yome okanye ibengcono okwangoku, beka kwisidambisi-manzi kangangesithuba semizuzu eli-10 ukunqanda ukomisa. Ukuba imbewu iyaqhekeka, uyomisile.
Sebenzisa imbewu yokunonga kwaye ugcine ezimbalwa okanye ezimbini ukuqinisekisa ukuba zomile ngokupheleleyo. Bomise ngakumbi kwaye ugcine.
Ungagcina ezinye iimbewu ukuze uzityale kwisizini ezayo ukuba nje izityalo zakho ze-cilantro bezingama-heirlooms hayi ii-hybrids.
Uyikhulisa njani iCilantro ngaphakathi
Kwiindawo apho kubanda kakhulu okanye kushushu kakhulu kwi-coriander, ungakhula i-cilantro ngaphakathi ezindlini ngeembiza ezineziphumo ezilungileyo. Kuya kufuneka ubeke endaweni ethe ngqo elangeni ubuncinci iiyure ezintandathu ngosuku okanye usebenzise izibane ezikhulayo.
Yityale ngqo imbewu ngokukroba holes 'imingxunya emhlabeni kwaye ugqume ngomhlaba.
Gcina umhlaba ufumile ngamaxesha onke.
Qinisekisa ukuba izityalo zisebumnyameni ubuncinane iiyure ezisibhozo kwiiyure ezingama-24 zonke.
Iimbiza ezincinci zokuLima iiCerantro Herbs
Iimbiza zinokunciphisa umda kwimbewu yecoriander onokuyivuna. Ngesi sizathu, unokukhetha ukukhulisa i-cilantro kwiimbiza ezincinci ezizezika-5 'iimbiza ezinzulu ezibanzi ezifanelekileyoukukhula imifuno.
indlela yokwazisa ukufa ku-facebook
Ukuvuna izityalo ze Potil Cilantro
Unokuvuna amagqabi e-cilantro kanye xa iiseti ezimbalwa zamagqabi ayinyani ziqala ukuvela, Vuna amagqabi angaphandle nalawo asezantsi nanini na xa ufuna imifuno.
Ungaze uvune ngaphezu kwesinye esithathwini samagqabi ngexesha.
Gcoba amaqabunga aphezulu kwiziko ukukhuthaza ukukhula kwe-bushy nokukhusela i-bolting (ukubeka imbewu).
Ukuvuna okungaphelelanga kunokuphindwa kathathu okanye kane.
Unokuvuna sonke isityalo xa sele siqala ukubopha okanye ungasivumela ukuba siqhakaze siye kwimbewu.
Ungaqala isityalo esitsha ngokutshintsha umhlaba uphinde usebenzise loo mbiza inye.
Sebenzisa amagqabi kunye nembewu
Imbewu yeCoriander yinxalenye yeUmxube wekhari, kodwa incasa kunye nencasa yembewu kunye namagqabi zizinto zomhlaba ngokwahlukeneyo. Amagqabi ahlala echazwa njengepepile kunye nelamuni ngelixa imbewu ingacacanga kwaye ingumhlaba.
Amagqabi eCilantro ahlala ebizwa ngokuba yiCoriander
Ukuba umntu uthi 'cilantro,' akukho kungacaci. Kodwa ukuba nayiphi na iresiphi ebiza i-coriander ikubuza ukuba uyinqunqe, iresiphi ithetha amagqabi esityalo. Iresiphi yokutya yaseThai ebiza ukuba icoriander inqunyulwe kuthetha ukusebenzisa iingcambu zesityalo, ezixineneyo.
ICoriander okanye iCilantro Misnomers
Lao yekoriyandire ( Anethum amangcwaba / dill), iCulantro ( Ukuvumba okunukayo ) Kunye neParsley iparsley ( I-Anthriscus cerefolium / chervil) ayizizo ii-corianders eziyinyani. Nangona kunjalo, nganye nganye yeyosapho olunye njengecilantro / coriander.
Amagqabi e-Cilantro asetyenziswa ngokucocekileyo nangokucocekileyo njengokuhombisa kwiisaladi, isuphu okanye iicheri. Zingasetyenziselwa ukwenza i-salsa, i-guacamole okanye i-condiments efanayo. Ubushushu buhlutha enye yeencasa zayo. Ukupheka phantse kuyitshabalalisa ngokupheleleyo incasa kwaye kuyenza ukuba ibe nencasa ekrakra. Ngokungafaniyo neminye imifuno eyomileyo, i-cilantro eyomileyo inencasa ebukhali kunenguqulo yayo entsha.
Iphunga elimnandi kunye nencasa yembewu yekoriyandire zihamba kakuhle nazo zonke iintlobo zokutya kwenyama. Iimbewu zihlala zisetyenziselwa ukwenza umgubo iziqholo. Ii-Curries azisoze zenziwa ii-curries ngaphandle kwe-coriander. Ezinye zokupheka zibiza imbewu yecoriander entsha. Ezinye iindlela zokupheka zibiza i-coriander eyosiweyo okanye eyimpuphu. Imbewu iphela iyongezwa kwiiresiphi zokupheka kunye nembewu yekoriyander ecoliweyo ihlala isetyenziswa kwinyama casseroles.
I-Cilantro Herb kunye nembewu yeCoriander
Nokuba uyasithanda isityalo se-cilantro ngenxa yamagqabi aso, imbewu, okanye zombini, ixhaphake kakhulu kwaye kufanelekile ukutyala. Ukusebenzisa i-cilantro kwiindlela zokupheka ezahlukeneyo kongeza nje isixa esifanelekileyo sesidlo nasiphi na isidlo.
Amaqebengwana Omtshato Khuphela Music Xabiso Metals Ukuqhuba Tips Iifad Diets
ingaba inquma liya ngasekhohlo okanye ngasekunene
iwayini emnandi ebantwini abangayithandiyo iwayini
Isipaji somntu onqamlezayo esinamakhadi okuthenga ngetyala
amagama amakhwenkwe aqala ngonobumba a